Samsung Galaxy S6 Edge +, mamakafaka azy amin'ny horonantsary | Androidsis
Alfonso ny voankazo | | IFA, Samsung
Isan-taona dia nanararaotra ny tontolon'ny IFA Berlin i Samsung mba hanolorana ny phablets andiany vaovao avy amin'ny faritra Note. Hafa mihitsy anefa ity taona ity. Ilay mpanamboatra Koreana nandroso tamin'ny volana aogositra la fampisehoana ny Samsung Galaxy S6 Edge + ary ny Galaxy Note 5 mba hanana toerana bebe kokoa hampiasana alohan'ny hahatongavan'ilay vaovao avy any Apple.
Mazava ho azy, ny mazava fa ny Samsung dia samy hitondra ny Samsung Galaxy S6 Edge + sy ny Samsung Galaxy Note 5 amin'ny fampirantiana teknolojia lehibe indrindra any Eropa. Ary tsy ho diso anjara amin'ny fampisehoana aminao amin'ny horonantsary izahay fahatsapana voalohany fa ny Samsung Galaxy S6 Edge + dia nahatonga antsika.
1 Samsung Galaxy S6 Edge +, manaraka ny tsipika nomen'ny zandriny lahy
2 Ny toetra ara-teknikan'ny Galaxy S6 Edge +
3 Fahafahana sy vidin'ny Samsung Galaxy S6 Edge +
Samsung Galaxy S6 Edge +, manaraka ny tsipika nomen'ny zandriny lahy
Ny Samsung Galaxy S6 Edge + dia tsy diso fanantenana, araka ny efa nampoizina. Ny phablet miolakolaka roa-panamboarana vaovao an'ny mpanamboatra dia manana iraka hanarona ny varotra very avy amin'ny Ny fanapahan-kevitr'i Samsung tsy hitondra ny Galaxy Note 5 mankany Eropa. Tsy fantatray raha nahomby izy ireo na tsia niaraka tamin'ity hevitra ity, fa ny azonay manome toky anao dia izany ny Galaxy S6 Edge + dia manana endrika tsy manam-paharoa.
ny famaranana premium Mampiroborobo ny kalitao avy amin'ny mason-koditra rehetra izy ireo, ka nahatonga ny telefaona fitaovana mahafinaritra eraky ny tanana. Ankoatr'izay, ny rafitra vy dia manome ny Samsung Galaxy S6 Edge + endrika mahaliana iray.
Ny toetra ara-teknikan'ny Galaxy S6 Edge +
X X 154.4 75.8 6.9 MG
efijery 5.7 santimetatra 2550 x 1440 teboka (518dpi)
Tahiry anatiny 32 GB / 64 GB / 128 GB
Kardan'ny micro SD No
Fakan-tsary aoriana 16 megapixels
Karazana karatra NanoSIM
vidiny 799 euros
Araka ny efa hitanao tao amin'ny horonan-tsary anehoanay anao ny tsiambaratelony rehetra, dia tena tsara ny Galaxy S6 Edge +.
Fahafahana sy vidin'ny Samsung Galaxy S6 Edge +
Amin'ny zavatra fantatsika, ny Samsung Galaxy S6 Edge + dia efa misy eto amin'ny firenentsika amin'ny vidiny 799 euro ho an'ny kinova miaraka amin'ny tahiry anatiny 32 GB.
Ahoana ny hevitrao momba ny telefaona Samsung vaovao? Mendrika filokana ve ity phablet ity sa tsara kokoa ny mahazo ny Huawei Mate S?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S6 Edge +, ireo no fiheverana voalohany ho anay
aorian'ny fampiasana roa andro dia mieritreritra aho fa mitovy
Blocky Highway dia avy amin'ireo mpamorona ny Blocky Roads izay manana endrika sary manokana